Gabar Fanaanad ah Oo sida Madaxweyne loogu soo dhaweeyey Holland -Muuqaal - iftineducation.com
iftineducation.com – Fartuun Cumar ayaa waxaa ay maanta soo gaartay magaalada Amsterdam ee dalka Holland, waxaana garoonka uga hortegay oo kusoo dhaweeyey fanaaniin ay ka mid yihiin Abdi Baadil, Laki Xaaji Waceys iyo Abdi Dajiye, iyo qaar kamid dadweynaha taageera fanaanaadaasi.
Waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Fanaankii hobollada Waaberi Abdi Baadil Ibrahim, kaasi oo sheegay inay Fartuun Cumar tahay fanaanad wadaniyad ah islamarkaana fanka maanta jira uga jirta kaalimaha hore. Sidaasi darteedna uu ugu yimid soo dhaweynteeda.
Fanaanada Laki Waceys ayaa dhankeeda sheegtay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta Fartuun Cumar,intaasina waxaa ay raacisay inay maalinta 25 bisha inay show weyn oo ay kala qeybgalayaan fanaaniinta Holland iyo Germany ay ku qaban doonto Fartuun magaalada Utrecht, ee Holland.
Nabadoon fariin dalab farsameysan wadata u diray Ra’iisul Wasaaraha